Nhau - Iwe uchiri kusarudza echinyakare kutenderera uye mativi egirazi?
Magirazi egirazi ave chimwe chezvinhu zvinodiwa mumugwagwa. Iwe uchiri kusarudza echinyakare kutenderera uye mativi egirazi?
Paunenge uchifamba mumugwagwa, chinhu chekudzivirira maziso ndiwo magirazi ezuva. Munguva pfupi yapfuura, fashoni yemafuremu asina kufanira akaridzwa chinyararire muindasitiri yezvishandiso. Aya maratidziro emagirazi haakwanise kungo nyatsoenderana nechero dhizaini yekupfeka, asiwo zvakare iwe mune yakapusa yezuva nezuva collocation. Zvisinganzwisisike zvakasarudzika, ndiyo sarudzo yakanakisa yekutora mifananidzo mumugwagwa kuratidza hunhu hwayo.
Ichi chigadzirwa chinoshandisa dhizaivhu-rakaumbwa dhizaini uye yakajairwa isina muganho dhizaini kuwedzera zvishoma zvehupenyu kune hwezuva nezuva hunofinha hupenyu uye kukwezva kutarisisa kwevanhu chero.
Silicone mhino mapedhi anogona kudzikisa kumanikidza pamhino, zvichikuita kuti uve wakasununguka kupfeka. Iyo furemu zvinhu ndeyesimbi, uye izvo lens izvo AC. Kune 7 mavara eaya magirazi, ayo anogona kuenderana chero mbatya dzaunoda.
Sinle katsi ziso girazi magirazi echinyakare akajeka magirazi emadzimai vakadzi butterfly magirazi,
2020 ITSVA Kusvika Zhizha Diki Dhizaina Magirazi Ekunze Fashoni Vintage Tsika Dhizaina GIrls Mucheche Retro Katsi Ziso Kupfeka INS Yakachipa, Yakagadzirirwa fashoni yemhando yepamusoro Oversized zuva magirazi esimbi Mabutiro egirazi, Dhizaina shavishavi chimiro mumvuri simbi vakadzi vakadzi mavara emalenzi magirazi, Huru Butterfly Frame Magirazi Makadzi Vakadzi 2018 Brand Designer Katsi Ziso Dzvuku Bhuruu Gradient Mirror Zuva Magirazi, Oversize Square Magirazi evakadzi Vakadzi Vepinki Huru Dhizaini Girazi Magirazi Varume Akasarudzika Brand Vintage Retro Eyewear Oculos.